3 Talaabada inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka HTC Mid ka mid ah
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka HTC Mid ka mid ah
Ka soo kabashada fariimaha qoraalka ah tirtiray ka HTC Mid ka mid ah ...
Waxaan stupidly tirtiray dun fariimaha qoraalka ah oo muhiim ah aan telefoonka, HTC Mid ka mid X. ah Waxaan la sugayay oo dhan ayay ka badan forums si aad u ogaato jawaabta taas, laakiin ma nasiib wacan. Waxaan la yaabanahay hadii hadday tahay habka noocan oo kale ah. Fadlan, hadii aad ogtahay, ii soo sheeg, ama laga yaabee ii farta jihada saxda ah. Waxaan noqon doonaa si gaar ah ugu mahad celinayaa.
Dhab ahaantii, waxaa jira hab 100%. Iyadoo qalab kabashada dhinac saddexaad, waxaad soo kaban karto, fariimaha qoraalka ah lumay si fudud. Waxaad u baahan tahay inaad tan sameyso sida ugu dhaqsaha badan ka hor inta Farriinta tirtiray yihiin overwritten. Mar haddii ay overwritten, jid lahayn weligiis. Waa hagaag, ha weydiin sida xogta la overwritten, sababta oo ah waxa kaliya ahayn dhacdo. Marka ay jirto xog cusub, waxa loo baahan yahay meel ka mid ah, ka dibna u overwrite doonaa xogta la tirtiro kala sooc lahayn in ay qaataan boos ah. Taasi waa. Qofna ma yaqaanno oo xogta marka hore la tirtirayaa. Sidaa darteed, sida ugu wanaagsan waa joojiso isticmaalka telefoonka oo wuxuu oofin soo kabashada sida ugu dhaqsaha badan.
3 tallaabo dib u soo ceshano fariimaha qoraalka ah ee la tirtiro HTC Mid ka mid ah
Haddii aad weli aysan haysanin HTC Mid ka mid ah SMS qalab soo kabashada, waxaad heli kartaa aan talo: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Tani kabashada xogta Android kuu ogolaanaya in aad si toos ah baarista HTC Mid ka mid ah si ay u baadhaan qoraalka thread fariin tirtiray, oo ay ku jiraan sawiro iyo videos ku lifaaqan. Ka hor inta soo kabashada, waxaad ku eegaan kartaa fariimaha heleen sidii arkaysid ee aad taleefan. Haddaba waxaa soo bixi oo lagu rakibay on your computer.
Tallaabada 1. Isku aad telefoon oo aad u aqoonsaday
Si loo sameeyo One HTC loo aqoonsaday by Wondershare Dr.Fone for Android, aad u baahan tahay si loo xaqiijiyo in ay tahay in debugging USB hore. Just sameeyo ama halkan ka fiiri: Settings < Codsiyada < fursadaha horumarinta <hubi debugging USB .
Marka aad telefoonka waa in hab debugging USB, aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Sawirka aad HTC Mid ka mid ah farriimaha laga badiyay
Waqtiga sawiridda, waxaa jiri doona ogeysiis idin xusuusiyo marka scan ee xiriirada iyo fariimaha la dhamaystiro. Haddii aadan rabin in baaritaan buuxa oo ku sawiro iyo videos, aad waxaa joojin kartaa. Maxay muhiim u ah in aadan ha ka furid telefoonka aad sabab kasta.
Tallaabada 3. Browse ceshan fariimaha tirtiray eegista
Skaanka qoto dheer waa in yar oo wakhti dheer qaata. Marka waxa soo gabagabeynayo, waxaad dooran kartaa fariimaha ka mid ah qaybaha dhanka bidix uu furmo suuqa ee xitaa content buuxda. Ma aha oo kaliya content qoraalka, waxa kale oo aad isticmaali kartaa sawiradii iyo videos ku lifaaqan ee dunta. Markaas waxaad eegi kartaa waxa aad rabto in aad dib u hesho oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Farriimaha in aad isticmaali kartaa in natiijada scan ka hor soo kabashada waxaa ku jira waxyaabaha la tirtiray iyo kuwa hadda jira ee aad taleefan. Haddii aad rabto in aad kaliya dib waxyaabaha tirtirto, waxaa jira hab degdeg ah. Riix badhanka (oo keliya ayaa soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray) dusheeda in ay ku soo noqdaan, ka dibna hubi category oo dhan fariimaha. Waxaad soo kaban karto, oo iyaga haatan badbaadiyo.